संयुक्त राज्य अमेरिका मा शिक्षा प्रणाली स्तर के हुन्? | USAHello | USAHello
अमेरिकामा, सार्वजनिक विद्यालय उमेर बीच सुरु4र6जबसम्म जारी 16 गर्न 18 वर्ष पूरानो. तपाईं पनि आफ्नो बच्चाहरु पूर्व स्कूल-एक प्रारम्भिक उमेर मा पठाउन सक्नुहुन्छ. अमेरिकी शिक्षा प्रणालीको विभिन्न स्तर बारे जान्नुहोस्. नियुक्ति के सिक्न र विद्यालय आफ्नो बच्चा कसरी राख्न.
अमेरिकी कानूनमा, छोराछोरीलाई केही उमेर बीचमा एक निश्चित संख्या लागि विद्यालय जाने गर्नुपर्छ. उमेर र वर्ष संख्या राज्य बाट अवस्थामा भिन्न. तिमी सक्छौ आफ्नो राज्य मा वर्ष को उमेर र नम्बर पत्ता.
अमेरिकी सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षा प्रणाली
प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा
प्रारम्भिक शिक्षा जवान छोराछोरीलाई कुरा गर्न प्रयोग अवधि शिक्षा उजागर भइरहेको छ. आफ्नो बच्चा बच्चा हुँदा पनि, यो तिनीहरूलाई पढ्न मदत गर्न महत्त्वपूर्ण छ, तिनीहरूलाई गाउन र तिनीहरूलाई दुवै आफ्नो मातृभाषा र अंग्रेजी सिक्न मदत. त्यहाँ दुई वा अधिक भाषा बोल्न छोराछोरीलाई देखाउँछ कि अनुसन्धान छ (हो “Billingual”) केवल एक भाषा बोल्ने बच्चाहरु भन्दा बढी लाभ. प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा केन्द्र र Daycare केन्द्र छोराछोरीलाई उमेर चार वा पाँच शिशुहरू लागि उपलब्ध छन्.
पूर्वप्राथमिक छोराछोरीलाई मदत गर्छ (उमेर तीन र चार) विकास. केही विद्यालय मा पूर्वप्राथमिक केटाकेटीलाई सुरु हुनेछ2साढे. पूर्वप्राथमिक तिनीहरूलाई पाँच उमेर वा छ मा स्कूल लागि तयार हुन मद्दत गर्छ. पूर्वप्राथमिक लागि एक विकल्प भनिन्छ हेड सुरु. कम आय परिवारबाट पूर्वप्राथमिक-बर्ष बच्चाहरु कार्यक्रम हेड सुरु धाउन सक्नुहुन्छ. टाउको सुरु सरकार द्वारा चलाइएको कम लागत पूर्वप्राथमिक छ. तपाईँले खोजी गर्न सक्नुहुन्छ लागि कार्यक्रम टाउको सुरु तिम्रो नजिक.
बच्चाहरु सामान्यतया किंडरगार्टन संग प्राथमिक विद्यालय सुरु (K) पाँच वर्षको उमेरमा र ग्रेड पाँच वा छ मार्फत जारी. तिनीहरूले उमेर दस वा एघार वरिपरि प्राथमिक विद्यालय छोड्न. बच्चाहरु एकल कक्षा मा एक शिक्षक थुप्रै विषयहरू सिक्न.
मध्य विद्यालय (पनि जूनियर उच्च विद्यालय भनिन्छ)
मध्य स्कूल आठ मार्फत विद्यार्थी ग्रेड सिकाउँछ छ. तिनीहरूले उमेर दस वरिपरि छन् 14. मध्य विद्यालय विद्यार्थी सामान्यतया कक्षा गर्न कक्षा देखि स्विच. तिनीहरूले एक विद्यालय दिनमा विभिन्न शिक्षकहरू हुन सक्छ. सानो समुदायमा, बच्चाहरु मध्य विद्यालय जान विद्यालय स्विच छैन. तिनीहरूले प्राथमिक विद्यालय जाँदै राख्न हुनेछ.
विद्यार्थीहरूको उमेर बीच उच्च विद्यालय धाउन 14 र सामान्यतया 17 वा 18. को कक्षाहरू विषयहरू व्यवस्थित गर्दै. एक विद्यार्थी एक दिन मा धेरै शिक्षकहरू हुन सक्छ. केही विद्यार्थी उन्नत कक्षाहरू लिन सक्छ. केही विद्यार्थीहरू कामको लागि वा कलेज लागि तिनीहरूलाई तयार कि कक्षाहरू लिन सक्छ. उच्च विद्यालय क्लब छ, गतिविधिहरु, खेल, काम-अध्ययन व्यवस्था, र अन्य गतिविधिहरु.
अमेरिकी शिक्षा प्रणालीमा स्कूल नियुक्ति
विद्यालय स्थापन निर्णय आफ्नो विद्यार्थी राखिनेछ जो ग्रेड मा अर्थ. जहाँ एक स्कूल आफ्नो ग्रेड भित्र एक विद्यार्थी स्थानहरूलाई यो पनि मतलब गर्न सक्नुहुन्छ.
तिनीहरूले छाउनीमा वा तिनीहरूको देश भागिरहेका थिए गर्दा धेरै शरणार्थी विद्यार्थी विद्यालय छुटेका हुन सक्छ. तिनीहरूले नै उमेर को एक विशिष्ट अमेरिकी विद्यार्थी भन्दा फरक ग्रेड स्तर मा हुन सक्छ. केही विद्यार्थीहरू उच्च-ग्रेड स्तर मा हुन सक्छ तर अझै अंग्रेजी बोल्न छैन. तिनीहरूले अंग्रेजी राम्रो सिक्न सम्म ती विद्यार्थी कठिन कक्षाहरूमा समस्या हुन सक्छ. अमेरिकामा विद्यालय कहिलेकाहीं गलत ग्रेड मा विद्यार्थी राख्न.
विद्यालय कसरी मेरो बच्चा राख्नेछ?
विद्यार्थी स्कूल वर्ष को सुरु गर्नु अघि वा स्कूल वर्ष को धेरै सुरुमा केही परीक्षण लाग्न सक्छ. यो परीक्षण लिखित हुन सक्छ. उनि एक वयस्क विद्यार्थी गर्न प्रश्नहरू पढ्न सक्छ. यो हरेक स्कूल जिल्ला लागि फरक छ.
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि आफ्नो बच्चा गलत ग्रेड मा राखिएको छ, तपाईं शिक्षक कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, प्रमुख, परीक्षण र आफ्नो बच्चा राखिएको गर्ने वा स्कूल कर्मचारी.
सोध्नु, "आफ्नो तर्क के थियो?"स्कूल तपाईं आफ्नो निर्णय बुझ्न मदत गर्न सक्छ.
को नियुक्ति गलत छ लाग्छ किन व्याख्या. तिनीहरूले आफ्नो कारण सँग सहमत हुनुहुन्छ भने तिनीहरूले नियुक्ति परिवर्तन गर्न सक्षम हुन सक्छ.
स्कूल जो वर्ग स्तर मेरो बच्चा लिन्छ कसरी निर्णय गर्छ?
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् स्कूल विद्यार्थी लागि स्तर छनोट. यी साधारण कारणहरू छन्:
विद्यार्थीलाई अंग्रेजी वा आफ्नो परीक्षण स्कोर कसरी राम्रो बुझ्नुहुन्छ
अभिभावक / संरक्षक सिफारिसहरू
मानकीकृत परीक्षण स्कोर, आवस्यकता अनुसार
चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न तत्परता
शिक्षक वा सल्लाहकार सिफारिस
विद्यार्थी काम नमूनाहरू
समान ग्रेड, विभिन्न स्तर
मध्य र उच्च विद्यालय नै ग्रेड विभिन्न स्तर सिकाउनुभयो छन् कक्षाहरू छ. केही कठिन र केही सजिलो हो. पाठ्यक्रमहरु को नाम कहिलेकाहीं कठिनाई को स्तर वर्णन. शब्दहरू स्कूल जिल्ला आधारमा परिवर्तन को.
सजिलो वा सजिलो अंग्रेजी स्तर प्रयोग कक्षाहरू लागि नाम:
ग्रेड लागि विशिष्ट स्तर मा कक्षाहरू लागि नाम:
एक उच्च वा उन्नत स्तरमा कक्षाहरू लागि नाम:
विकसित नियुक्ति (को)